စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် actuator
စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် actuator
AOX-မေး စီးရီး စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် အထူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ အဖွင့်အပိတ် နှင့် ပြောင်းလဲပစ် သေးငယ်သော ဘောလုံးကို / plug ကို vတစ်ဦးvles နှင့် dတစ်ဦးmper တစ်ဦးuသို့mတစ်ဦးtion.Becတစ်ဦးuse ကျွန်တော်တို့၏ ထုတ်ကုန် များမှာ အားလုံး ကျော်လွန် အဆိုပါ ကမ္ဘာကြီး, ကျွန်တော်တို့ များမှာ ကျြောစောသော ဘို့ အရည်အသွေး, တည်ငြိမ် စစ်ဆင်ရေး နှင့် လုံခွုံသော စစ်ဆင်ရေး. ကျွန်တော်တို့၏ AOX-မေး စီးရီး စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r, အဖြစ် အစဉ်အမြဲ, ဆက်လက် thဖြစ် လမ်းကြောင်းသစ် နှင့် လိမ့်မည် ဘယ်တော့မှ chတစ်ဦးnge.Choosing AOX ဖြစ် တစ်ဦး professionတစ်ဦးl ရှေးခယျြမှု။ ကျွန်တော်တို့ hတစ်ဦးve first-clအဖြစ်s ကုန်ပစ္စည်း နည်းပညာ နှင့် professionတစ်ဦးl R & D teတစ်ဦးm သို့ ပေး သငျသညျ နှင့် တစ်ဦးppropriတစ်ဦးte ဒီဇိုင်း။
torque 50 ~ 6000N rangeï¼။
AOX-မေးစီးရီးစက်တပ်အစိတ်အပိုင်းကိုအလှည့် actuator ၏ 1. ရှဲလ်: Hard လူမီနီယမ်သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောစက်မှုပတ်ဝန်းကျင်ဆန့်ကျင် coated ပြင်ပ epoxy အမှုန့် anodized ။
(AOX-Q-005/008/010 မှလွဲ. ) 2. torque switches များ
AOX-မေးစီးရီးစက်တပ်အစိတ်အပိုင်းကိုအလှည့် actuator များအတွက် 3. ဖြုတ် drive ကို Bush
2000: တစ်ခုချင်းစီ AOX-မေးစီးရီးစက်တပ်အစိတ်အပိုင်းကိုအလှည့် actuator IS09001 အားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုသည့် AOX အရည်အသွေးစနစ်ပေါ်တွင်အခြေခံသည့်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာထုတ်လုပ်နေသည်။ အဆိုပါ AOX အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးစနစ်လက်မှတ်၏ရလဒ်အဖြစ်သငျသညျထုတ်ကုန်အရည်အသွေး၏အာမခံချက်ရှိသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုသေချာခုနှစ်, ငါတို့သည်လည်းထိန်းချုပ်များ၏အသေးစိတ်ကို, အထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးဖို့အာရုံစိုက်, ချောထုပ်ပိုးထိရောက်စွာ AOX-မေးစီးရီးစက်တပ်အစိတ်အပိုင်းကိုအလှည့် actuator ၏အသွင်အပြင်ကိုသေချာနှင့်ဖောက်သည်ကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံကိုပေးနိုင်ပါသည်။
မေး: လက်ခံနိုင်ဖွယ် AOX-မေးစီးရီးစက်တပ်အစိတ်အပိုင်းကိုအလှည့် actuator များအတွက်နမူနာအမိန့်လား?
hot Tags:: စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်